China Soft PVC USB orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Amin'ny vanim-potoana maoderina, ny tsirairay dia manana USB farafaharatsiny iray na maromaro hamonjeny vaovao na handefasana angon-drakitra solosaina samihafa.
Amin'ny vanim-potoana maoderina, ny tsirairay dia manana USB farafaharatsiny iray na maromaro hamonjeny vaovao na handefasana angon-drakitra solosaina samihafa. nyUSB USB malefaka afaka miaro ny Mpamily USBtena tsara miaraka amin'ny fonony malefaka sy miorina amin'ny PVC. Tsy mila miahiahy momba nyMpamily USBvaky rehefa milatsaka. Ny fonosana malefaka PVC dia azo atao endrika mahafinaritra isan-karazany na loko samy hafa. Ny logo 3D feno dia mahatonga ny endrika ho feno sy manankarena kokoa. Izany dia manoritra tanteraka ny hevitry ny mpamolavola sy ny fanahiny lalina. Firaikiraikitra samy hafa toy ny peratra fanalahidy, kofehy, rojo vy, rojo baolina, afa-tsy ny mpamily USB no mahavita asa bebe kokoa ho an'nympamily USB USB malefakas. Rehefa mampiasa ilay malefaka ianaoUSB USB, mankafy ny fotoana fiainana mahafinaritra ianao amin'ny alàlan'ny singa manokana.
Ny tsanganana amin'ny mpamily USB USB malefakadia avy amin'ny 2 GB ka hatramin'ny 256 GB, mahafeno ny filanao isan-karazany amin'ny fangatahana tsanganana kely na lehibe. Azo atao ny mifampiraharaha amin'ny vidiny mifanaraka amin'ny fepetra takinao amin'ny antsipiriany.
Fitaovana: mpamily PVC malefaka + USB
Antony: Die Struck, 2D na 3D, lafiny roa
Famonosana: famonosana blister, na araho ny torolalana omenao.
Teo aloha: Medaly akrilika vita amin'ny vy
Drive USB Flash manokana
Mpamily USB USB
mpamily USB USB malefaka
USB Coasters heated